मधेशी मोर्चाको फाँसीवादी प्रवृत्तिले निम्त्याएको दुःखद घटना
नेकपा (एमाले)द्वारा सञ्चालित “मेची–महाकाली अभियान” सप्तरीमा आई पुग्दा मधेशी मोर्चाले अवरोध सिर्जना गरेको छ । कार्यक्रम भाँड्न खोज्ने जमातलाई नियन्त्रणमा लिन खोज्दा सोमवार सप्तरीको मलेठमा अप्रिय घटना समेत घट्न पुगेको छ । घटनामा सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोली लागेर चार जनाको मृत्यु हुनु निश्चय नै दुःखद र संवेदनशील विषय हो । तर सुरक्षाकर्मीले यो कदम नचालेको भए त्यहाँ टीकापुरकोभन्दा पनि भयावह घटना घट्न पो पुग्यो कि ? यसतर्फ पनि हाम्रो ध्यान जानु आवश्यक छ । यस दृष्टिबाट हेर्दा टीकापुरको जस्तै स्थिति आउन नदिन सुरक्षाकर्मीले त्यहाँ जुन कदम चाले, त्यो बाध्यात्मक भएको पनि हुन सक्छ । जे होस – २३ फागुनमा सप्तरीमा घटेको उक्त घटनाको निस्पक्ष छानबिन हुनुपर्दछ र दोषी उपर कार्वाही गरिनु पर्दछ । तर सप्तरीको घटना मधेशी मोर्चामा निहित फाँसीवादी, अलोकतान्त्रिक र विखण्डनकारी सोचको परिणाम हो भन्ने तथ्यलाई हामी कसैले पनि बिर्सनु हुँदैन ।
देशका जुनसुकै भागमा पनि शान्तिपूर्ण तरिकाले सभा, सम्मेलन र प्रदर्शन गर्न सबै राजनैतिक दललाई अधिकार छ । एमालेले पनि त्यही अधिकारको उपयोग गर्दै राष्ट्रिय एकताका लागि “मेची–महाकाली अभियान” सुरु गरेको थियो । एमालेको यो अभियान एक स्वागतयोग्य कदम थियो । त्यो अभियानमा अवरोध सिर्जना गरेर मधेशी मोर्चाले आफ्नो अलोकतान्त्रिक र फासिवादी चेहरा थप उजागर गरेको छ । अभियानमा अवरोध सिर्जना गर्ने मधेशी मोर्चाको यो कदम निन्दनीय र भत्र्सनायोग्य छ ।
एमालेले पछिल्लो समयमा राष्ट्रघाती संविधान संशोधन प्रस्तावका विरुद्धमा जसरी आफूलाई उभ्याई रहेको छ, यो सकारात्मक र प्रशंसनीय छ । एमालेको अडानले राष्ट्रिय महत्व राख्ने स्पष्ट छ । एमालेले राष्ट्रियताको पक्षमा देखाएको पछिल्लो अडान मधेशी मोर्चाका निम्ति ठुलो टाउको दुखाइको विषय बनी रहेको थियो । एमालेले राष्ट्रिय एकताका लागि भन्दै मेची महाकाली अभियान सुरु गरेपछि मधेशी मोर्चाले त्यसमा अवरोध सिर्जना गर्ने घोषणा गरी सकेको थियो । एमालेले २१ फागुनबाट अभियान सुरु गर्नु अघि नै सप्तरीमा मधेशी मोर्चाले विरोधका कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । २३ फागुनमा त मोर्चाले सप्तरी बन्दको नै आयोजना गरेको थियो । बन्द आह्वानका बाबजुद पनि दशौँ हजार जनता एमालेको सभामा सहभागी भएपछि त्यसलाई बिथोल्ने, लाठी भाला र पेट्रोल बम सहित मधेशी मोर्चाको एक जमात कार्यक्रम स्थलतर्फ अघि बढेको थियो । घटनाको प्रकृति हेर्दा थाहा हुन्छ– कैलालीको टीकापुरमाभन्दा पनि भयानक नरसंहारको घटना घटाउने योजनाका साथ नै मधेशी मोर्चाको जमात त्यहाँ अघि बढेको थियो । मधेशी मोर्चाको जमात विशुद्ध आफ्नै विवेकमा त्यसरी परिचालित थियो भनेर विश्वास गर्न सकिँदैन । त्यसका पछाडि भारतीय विस्तारवादको निर्देशन, उक्साहट र संलग्नता समेत रहेको स्वाभाविक आँकलन गर्न सकिन्छ ।
मधेशी मोर्चाले तराई मधेशका जनताको प्रतिनिधित्व गर्दैन । तराई मधेशका जनतामा देशभक्तिको भावना प्रचुर मात्रामा देखिन्छ । मधेशी मोर्चाले त्यहाँका देशभक्त नेपालीहरूको होइन, मुट्ठीभर जमिन्दारहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ भन्ने कुरा उनीहरूले अघि सारेका मागहरूबाट नै प्रष्ट हुन्छ । मुट्ठीभर मधेशी दलका नेताहरू, जो आफू भारतीय विस्तारवादको स्वार्थ रक्षाका लागि परिचालित भई रहेका छन् तर तराई–मधेशका जनतालाई भ्रममा पारेर आफ्नो चङ्गुलमा फसाई रहेका छन् । तराई मधेशका जनतालाई मधेशी दलको चङ्गुलबाट मुक्त गर्नका निम्ति अहिले एमालेले चलाएका जस्तै अन्य प्रमुख दलहरूले पनि तराई केन्द्रित अभियानहरू चलाउनु आवश्यक छ ।
पहिले प्रदेशको सीमाङ्कन गर्दा पहाडबाट अलग गरेर बारादेखि सप्तरीको तराई भूभागको अलग्गै प्रदेश बनाउने गल्ती प्रमुख दलहरूले गरेका थिए । अहिले मधेशी मोर्चाले त्यही २ नम्बर प्रदेशलाई आधार इलाका बनाएर सम्पूर्ण तराईलाई पहाडबाट अलग गराउन दबाब दिई रहेका छन् । यदि मधेशी मोर्चाले चाहे झैँ काँकडभित्तादेखि महेन्द्रनगरसम्मको समथर भूभागलाई मात्र समेटेर तराईमा एक वा दुई प्रदेश मात्र बनाइयो भने स्थिति के होला ? निश्चित रूपमा ती प्रदेशहरूमा राजनैतिक गतिविधिहरू अघि बढाउन अन्य राष्ट्रिय राजनैतिक पार्टीहरूलाई निकै नै मुश्किल पर्ने छ । राजनीतिक गतिविधि अघि बढाउन अन्य पार्टीहरूले मधेशवादी दलहरूको यस्तै अलोकतान्त्रिक र फासिवादी क्रियाकलापको सामना गर्नु पर्ने छ । ती प्रदेशहरूलाई विखण्डन हुनबाट जोगाउन काफी मुश्किल पर्ने छ । त्यसैले सप्तरी घटनाबाट पाठ सिक्दै प्रमुख राजनैतिक दलहरूले मधेशवादी दलहरूले चाहे झैँ तराईमा छुट्टै दुई प्रदेश बनाउने गरी सीमाङ्कनमा हेरफेर गर्ने गल्ती कदापि गर्नु हुँदैन । हरेक प्रकारका विखण्डनकारी प्रवृत्तिहरूका विरुद्धमा दृढतापूर्वक उभिन सक्नु पर्दछ ।
विखण्डनकारीहरूले सप्तरी घटनापछि तराईमा साम्प्रदायिक विद्वेष भड्काउने दुष्प्रयत्न गरी रहेका छन् । उक्त दुष्प्रयत्नलाई सफल हुन नदिन सरकार र प्रमुख दलहरू गम्भीर बन्नु निकै आवश्यक छ । जातीय तथा क्ष्ँेत्रीय संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै प्रमुख दलहरू जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाबाट अघि बढ्नु पर्दछ । जुनसुकै अवस्थामा पनि देशको राष्ट्रिय, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा आँच आउन नदिने प्रतिबद्धता प्रमुख दलहरूबाट आउनु पर्दछ । कुनै पनि दललाई बिना अवरोध सार्वजनिक स्थलमा शान्तिपूर्वक र्‍याली र सभा गर्ने अधिकार संविधानले नै प्रदत्त गरेको छ । मधेशी मोर्चाले संविधान प्रदत्त उक्त अधिकारलाई कुल्चदै सप्तरीमा एमालेको अभियानमाथि अवरोध सिर्जना गरेको छ । यस्तै अवरोध भोलि अन्य पार्टीका कार्यक्रममा पनि हुन सक्छ । मधेशी मोर्चाको यो कदम अति नै गलत छ । यस किसिमका अलोकतान्त्रिक र फासिवादी कदमलाई उसले तुरुन्त सच्चाउनु आवश्यक छ । मुलुकलाई जवरजस्ती मुठभेडतर्फ धकेलेर स्थानीय चुनाव हुन नदिने र अन्ततः संविधानलाई नै कार्यान्वयनमा आउन नदिने मनसायका साथ आएका यस्ता क्रियाकलापहरूलाई नियन्त्रण गर्ने मूल दायित्व सरकारको नै हो । यसर्थ सप्तरीमा २३ फागुनमा जुन दुःखद र संवेदनशील घटना घट्यो, यस्तो स्थिति देशका अन्य भागमा दोहोरिन नदिन सरकारले आगामी दिनमा सुरक्षा व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी किसिमले अघि बढाउनु पर्दछ ।